Euractiv, Financial Times, Politico Europe dia nilaza tamin'ny TSARA INDRINDRA tamin'ny Open Letter
Home » Lahatsoratra farany farany » tompon'andraikitra » Euractiv, Financial Times, Politico Europe dia nilaza tamin'ny TSARA INDRINDRA tamin'ny Open Letter
Vaovao Mafana Belzika • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Kolontsaina • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana Malta • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Profesora Geoffrey Lipman, filohan'ny International Climate Friendly Travel Community (ICTP) sy Juergen Steinmetz, filohan'ny World Tourism Network dia nidera ireo fikambanana eropeana 16 noho ny fandavany handray andraikitra amin'ny resaka eropeana amin'ireo fikambanan'ireo boky sy gazety izay manohana ampahibemaso ny solika fosily.
Fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena 16 lehibe no nilaza fa tsy hanaiky fanasana intsony hiteny amin'ny hetsika haino aman-jery momba ny politikan'ny EU tohanan'ny orinasan-tsolika fosily.
Nanao izany izy ireo tamin'ny alàlan'ny taratasy misokatra ho an'ny tonian-dahatsoratry ny fikambananan'ny vaovao eropeana telo, Euractiv, ny Financial Times ary ny Politico Europe.
Ny taratasy dia mivaky toy izao: Tompoko / Ramatoa, Amin'ny maha mpiady fampielezankevitra eropeana anao momba ny toetrandro sy ny fitsarana ny toetrandro, manoratra aminao izahay mba hampahafantatra anao fa tsy hanaiky fanasana intsony izahay hiteny amin'ny hetsika nokarakarain'ny fikambananao media momba ny politikan'ny EU miaraka amin'ny fanohanan'ny fosil. orinasan-tsolika.
Ho an'ny indostrian'ny solika fosil, toy ny indostrian'ny paraky, dia ny sary no zava-drehetra. Ny fahitana azy ho mpiara-miombon'antoka ara-dalàna ary ampahany amin'ny vahaolana amin'ny krizy amin'ny toetrandro no lakilena. Amin'ny alàlan'ny fanohananana hetsika avo lenta karakarain'ny fampahalalam-baovao toa anao, ny indostrian'ny solika fôsily dia mividy sehatra hahazoana fitokisana sy fitaomana lehibe.
Ao anatin'ny vanim-potoana iray izay fanaparitahana disinformation amin'ny tambajotra sosialy, ary rehefa mihasarotra ny tsy fitovizan'ny dokam-barotra sy ny lahatsoratra, dia mino tanteraka izahay fa ny haino aman-jery malalaka dia manana andraikitra lehibe hitazona ny demokrasia sy ny fahalalahana miteny.
Na izany aza, ny fikatsahana objectivity dia tsy entin'ny alàlan'ny famelana ny indostrian'ny solika fosily mpanohana sehatra media. Ny andraikitry ny karbonina, ny solika ary ny entona mitohy amin'ny fanafainganana ny krizy amin'ny toetrandro sy ny fanalefahana ny fiasan'ny toetrandro dia tsy resaka hevitra, ary ny famelana ny indostria hanohy hamolavola ny resaka dia mety hanemotra ny dingana maika ilaina hamerana ny fanafanana manerantany amin'ny toetra tsy manam-paharoa sy ny fiaraha-monina afaka mahazaka.
Raha ny filazan'ireo mpianatra an-tapitrisany maro mahaliana amin'ny toetrandro: may ny tranonay.
Ary ny indostrian'ny solika fôsily dia manana fitoeran-tsolika eny an-tànany. Rehefa manararaotra ny maha-azo itokisana ireo sehatra fampitam-baovaonao ireo orinasan-tsolika fosily ho isan'ny paikady hametrahana ny fe-potoana iadian-kevitry ny besinimaro sy hananganana ny tenany ho akaiky ny mpanapa-kevitra dia manampy azy ireo handraraka solika amin'ny afo ianao.
Faly izahay fa namoaka ity taratasy ity ianao mba hahafantaran'ny mpamaky sy ny mpandray anjara amin'ny hetsika ny antony tsy fisian'ny fikambananay amin'ireo hetsika mety karakarainao amin'ny alàlan'ny indostrian'ny solika fôsily. Ary manentana anao izahay handroso bebe kokoa amin'ny famahana ny olana goavana ateraky ny fitaoman-tsolika faosily, amin'ny tsy fandaminana hetsika hafa intsony miaraka amin'ny fanohanan'ny orinasan-tsolika fosily.
Politika Maimaimpoana Fosily
Federasiona eoropeanina ho an'ny serivisy ho an'ny daholobe
Hetsika amin'ny sakafo sy rano Eropa
Naman'ny Tany Eoropa
Fitaterana sy tontolo iainana
Tanora ho an'ny toetrandro
Biraon'ny politika eropeana WWF